रो जगारीका लागि नेपाल आउने विदेशी कामदार बढे, कति आए?
Homeबिबिधरो जगारीका लागि नेपाल आउने विदेशी कामदार बढे, कति आए?
December 9, 2019 kandai kanda 1 बिबिध
काठमाडौं, मंसिर २३ । नेपालमा सिमेन्ट उद्योग र हाइड्रोपावर कम्पनीमा लगानी बढेसँगै रोजगारीका लागि नेपाल आउने विदेशीको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ।
श्रम ऐनमा ५ प्रतिशत मात्र विदेशी कामदार राख्न सकिने प्रावधान भए पनि परियोजना थपिएसँगै रोजगारीका लागि नेपाल आउने विदेशीको संख्या बढेको हो।
गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा यो वर्ष रोजगारीका लागि नेपाल आउने विदशीको संख्या १४ प्रतिशतका दरले बढेर १ हजार ४८३ पुगेको छ। यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा गोपाल संग्रौलाले लेखेका छन्।
अघिल्लो वर्षको तथ्यांकअनुसार वैशाखदेखि असोजसम्म नेपाल आउने विदेशी कामदारको संख्या भने १ हजार ३०५ थियो।
माधव नेपाललाई ‘विशेष दूत’ बनाउने कुरा ह ल्ला मात्रै
प्रधानमन्त्री ओलीले देखाए कालापानीमा चा सो